Madaxweynaha turkiga oo booqanaya dalka sucuudiga | Radio Muqdisho
Madaxweynaha turkiga oo booqanaya dalka sucuudiga
Madaxweynaha dalka turkiga recep tayyip erdogan ayaa shaaciyey in bisha February ee soo socota uu booqan doono wadanka boqortooyadda sacuudiga.
Hogaamiyaha turkiga ayaa waxaa dalka sacuudiga ugu dambeysay sannadkii 2018 oo la dilay wariye Jamaal kashowqi oo lagu qaarjiyey magaalada Istanbul.
Dilka suxufigaasi oo lagu dilay gudaha qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ayaa keentay in xumaado xiriirka labadaasi wadan.
Madaxweyne erdogan ayaa sheegay bisha soo socotay uu booqasho rasmi ku tegi doono magaalada Riyadh isagoo xusay in isaga iyo madaxda sacuudiga ay ka wada hadleen doono arimo badan.
Jamaal kashowqi oo ah suxufi wax ku qori jiray wargeyska Washington post ee ka soo baxa dalka mareykanka ay lagu dilay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada Istanbul xilli uu doonayey halkaasi uu ka sameysto documentiyo si uu ula aqal galo gabar uu xiriir jaceyl kala dhaxeeyay.
Dilka wariyahaasi ayaa hadal heyn badan ka abuurtay caalamka taasoo keentay in khilaafkii ugu xumaa uu soo kala dhex galo wadamada sacuudigayo iyo turkiga.
Sannadkii 2019 ayaa waxaa sacuudiga uu cadaadis xoogan sare sidii uu hoos ugu dhigi lahaa dhaqaalaha dalka turkiga oo si weyn hoos ugu dhacay.
Sannadkii hore ayaa waxaa dalka sacuudiga booqasho ku tagay wasiirka arimaha dibadda ee turkiga si dib loogu soo celiyo xiriirka labadaasi wadan oo si weyn u xumaaday sannadihii la soo dhaafay.